Ogaden News Agency (ONA) – Siminaarkii u socday hawlwadeenka JWXO ee Yurub oo sidii loogu talagaly u socda
Siminaarkii u socday hawlwadeenka JWXO ee Yurub oo sidii loogu talagaly u socda
Waxaa maalintiisii labaad galay Siminaarkii iyo Aqoon Iswaydaarsigii Hawlwadeenka iyo Masuuliinta Jaaliyaadka Yurub sihabsami ah uga socday magaalada Frankfurt ee dalka Germany. Siminaarkan oo furmay shalay ayaa lagu wadaa in bari oo Axad ah lasoo gabagabeeyo haduu eebuhu yiraahdo.
Ka qaybgaleyaasha siminaarka ayaa maanta waxaa horyaala qodobo aad muhiim u ah qadiyada Ogadenya iyo guud ahaan geedi socodka Halganka ay JWXO hormuudka katahay. Cashiradii iyo doodihii shalay ayaa dhamaantood ahaa kuwo aad ahmiyad iyo mudnaan gaar ah xanbaarsanaa.
Dhanka kale waxaa siwanaagsan oo cilmiyaysan usoo bandhigay una daadihinaya Masuuliin aqoon dheer uleh sooyaalka taariikh halgameedka taasoo ay u ifiyeen xubnaha kasooqaybgalay siminaarkan iyo aqoon kororsigan loogu talogalay kobcinta iyo kor uqaadista bisaylka Hawlwadeenka JWXO ee kudhaqan qaarada Yurub.
Faah faahinta warbixinta maalinta 2aad ee siminaarkan waxaad kala socondoontaa warbixinadaanada danbe haduu eebuhu yiraahdo ee hamoogaanina ONA.